Dubai iray amin'ireo tanàna manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao - Fitoriana ny tany
Dubai iray amin'ireo tanàna manan-danja amin'izao fotoana izao
Dubai & Security Road?
Enga anie 9, 2019
14 Topi-kevitra momba ny tetikasa Small Business ho an'ny orinasa hanangana ny orinasa ao Dubai
Enga anie 11, 2019
navoakan'ny Dubai City Company at Enga anie 10, 2019
Dubai iray amin'ireo tanàna manan-danja ankehitriny!
Dubai - iray amin'ireo tanàna manan-danja indrindra ankehitriny. Izy io dia fampifangaroana tontolo maoderina, futuristica sy havaozina ary isan-karazany ny mponina. Tena tsy mahagaga ny mahita ireo kolontsaina maro isan-karazany amin'ny iray toerana ary fantaro ny kolontsaina arabo mandritra izany fotoana izany. Betsaka ny toerana maro ao an-tanàna hikaroka sy hahafinaritra.
Ny zavatra voalohany hitanao rehefa tonga any Dubai ianao ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Dubai. Iray amin'ireo seranam-piaramanidina lehibe indrindra sy mahavariana an'izao tontolo izao. Torohevitra iray azoko omena anao ny famakiana ny serivisy Marhaba alohan'ny hahatongavana. Ity dia serivisy mahasoa sy sarobidy amin'ity seranam-piaramanidina be mpampiasa ity. Izy io dia hamonjy anao ny fotoana ary hialana amin'ny fisavorovoroana mety ho azonao rehefa tonga ianao.
An seranam-piaramanidina mpanampy hiandry anao eo am-bavahady amin'ny fahatongavanao ianao ary hikarakara ireo fombafomba rehetra amin'ny seranam-piaramanidina. Ianao dia mila manome ny pasipaoronao amin'ny mpandraharaha ary izy no hikarakara ny ambiny, raha manam-potoana hijery sy mizaha ny seranam-piaramanidina ianao.
Satria lehibe ny halaviran-davitra homena fiara buggy ianao, izay hamindra anao amin'ny vavahady rehefa tonga any amin'ny ELEVATOR malaza, izay mitondra anao amin'ny toerana fanao sy fangatahana entana. Ity lefona ity dia mahavariana izay mandao ny fahatsapana WOW, rehefa mitsangantsangana ao aminy satria lehibe loatra ka mety haka olona 60 ary misy koa riandrano tsara ao aorian'izany mba hijery raha mandeha eny.
Matetika, ny filaharana amin'ny fomba amam-panao dia lava, satria mila manao maso maso ianao ary avy eo aorian'ny fisavana pasipaoro. Miaraka amin'ny serivisy Marhaba dia afaka miala amin'ny filaharana ianao, satria loha laharam-pahamehana ianao amin'ny sehatra manokana voatondro ary mandehana haingana kokoa noho ny hafa. Ary eo amin'ny faritra fangatahana entana ihany koa, dia hisy mpandraharaha manana troli, izay hikarakara ny entanao, hampindrana azy ho anao amin'ny fivoahana, ary naiditra ao anaty fiara ho anao aza izy io, na dia tsy manelingelina anao aza. Ity serivisy ity dia misy ny famoahana visa amin'ny fahatongavany ary koa ny efitra fandraisam-bahiny manokana izay ahafahanao miala sasatra alohan'ny handehanany amin'ny lalana miverina. Ka dia tendro tsara izany tokony ho ao an-tsaina rehefa mitsidika an'i Dubai indrindra rehefa sambany.
Ankehitriny dia ho hitantsika ity tanàna ity ary hanambara ny tontolo iainany
Ny iray amin'ireo mahaliana indrindra dia i Dubai Marina. Faritra trano fisakafoanana sy fisakafoanana mahafinaritra misy faritra iray miaraka amin'ny fomba fandraisam-bahiny mahafinaritra hotely Burj Al Arab. Azonao atao ny mahatsapa ny tontolon'ny haino aman-tany arabo miezaka mafy Arabo sakafo mandritra ny fananana shisha-fitaovana mifoka sigara eo an-toerana misy tsiro hafa.
Hetsika mahafinaritra voalohany tsy tokony ho sahirana ianao raha mitsidika ny efitra. Raha tsy nandalo tany an'efitra ianao dia tsy avy tany Dubai.
The desert safari misy hetsika toy ny: Dune Bashing miaraka amina fiara be entana any am-pasika. Mitaingina rameva, misakafo hariva, mipetraka amin'ny sariety manokana any anaty fasika raha mijery ny dihy arabo mahazatra arabo - fampisehoana tsy mampino izay tsy hitanao afa-tsy any Dubai. Anisan'ny dihy mampidi-doza sy tsara tarehy dia vehivavy mpandihy izay misy sabatra eny an-tanany, eo ambanin'ny feon'ny mozika orientaly. Milalao sy mandihy miaraka aminy toy ny kilalao izy, saingy miaraka amin'ny fitazonana ilay mpandinika foana ary mamela azy ireo ho toy ny ao anaty milina fotoana. nafindra tao amin'ireo fairy Arabo mazàna.
Milalao sy mandihy miaraka aminy toy ny kilalao izy, fa mandritra izany mitazona am-pitiavana ny mpandinika ary mamela azy ireo hahatsapa toy ny ao anaty masinina fotoana iray nafindra tao amin'ireo fairy arabo mahagaga Arabo.
Ny hetsika hafa dia ny Henna Paintings- sary mahafinaritra vita amin'ny tanana sy ny tànana. Toa tato izy fa misy loko volontany, izay maharitra herinandro na roa eo ho eo, dia miankina amin'ny fomba itondranao azy sy ny fahitsiany ny fampidirana rano. Matetika ny vehivavy eo an-toerana dia mitafy izany toy ny firavaka niampy ny akanjo-pirenena.
Betsaka ny tranombarotra sy baza eo amin'ny tany efitra, izay ianao afaka mividy souvenir sy ny akanjo ampiakan'ny mpandihy- dia fehin-dasy roa amin'ny loko isan-karazany namboarina tamin'ny penina loko volamena kely, izay miteraka feo izany rehefa mandihy - fomba oriental mahazatra mahazatra. Izany dia mety hijanona ho fahatsiarovana ao amin'ny lobakao. Desert safari dia traikefa tsy hay hadinoina izay tsy maintsy atao rehefa mitsidika an'i Dubai Azonao atao mora ny mamaky io fifampiandohana io amin'ny iray amin'ireo orinasa eto an-toerana Desert safari Dubai http://www.desertsafaridubai.com/ izay ahafahanao mahazo ny tolotra tsara indrindra sy ny fampifandimbiasana ny fonosana.
Ny tranobe avo indrindra eto an-tany Burj Khalifa
Ny toerana manaraka ho an'ny fitsangatsanganana tsy maintsy atao, mazava ho azy, ilay trano avo indrindra erak'izao tontolo izao Burj Khalifa. Ny loharano manaraka azy io dia rano mandihy tsara eo ambany feon'ny mozika samihafa sy ny vokatry ny hazavana. Misy trano fisakafoanana sy fivarotana lehibe maro amin'ity faritra ity izay afaka hitrandraka.
Fitaterana fivarotana maro, misy maro, fa ny malaza indrindra dia ny Dubai Mall sy ny Mall of the Emirates. Ao amin'ny Mall of the Emirates, mety hahita ny faritry ny Ski ianao fa avy amin'ny andro mafana any ivelany mety hisedra anao ny filomanosana eny amin'ny tranombarotra.
Dubai mall manana aquarium lehibe indrindra izay ahafahanao mahita ny antsantsa sy ny zavaboary samy hafa ranomasina.
Ny fiantsenana dia mety hahafinaritra ihany koa. Ankoatra ny fivarotana sy ny toeram-pivarotana lehibe dia misy koa faritra hafa miafina afaka miantsena amin'ny fomba kely hafa sy tsy azo tononina amin'ny fomba tsy fantatra ianao. Eny, fantatsika rehetra ilay sehatra tamin'ny sarimihetsika faharoa Sex sy ny tanàna, izay hankanesan'ny tovovavy mankany amin'ireo magazay miafina hividy kitapo marika lainga. Marina izany - resaka momba ny magazay miafina no resahiko. Ireo toerana tsy hitanao be dia be satria mipetraka ao amin'ny trano izy ireo hivelomana.
Raha hihaona amina mpivarotra amoron-dalana izay manasa anao hanana fijery eo amin'ny magazay miafina ianao, aza matahotra ary mandehana hijery sy hiaina ity fomba fivarotana mampientam-po ity. Ary tsarovy ny mifampidinihana !. Mpivarotra toy ny fandrindrana, ka tsy maintsy manana fahaiza-manao tena tsara fanakalozana raha tsy izany mety handany volabe mampihomehy ianao amin'ny marika sandoka.
Fantatsika rehetra fa mamirapiratra, Dubai no manavao sy mamirapiratra. Fa na dia ny vanim-potoana niainan'ny firenena aza, manana ny tantara koa ity firenena ity. Azonao atao ny mijery sy mizaha ny tanàna tranainy any Dubai. Raha mankany ianao dia mila mandeha sambo ianao ary miampita ny renirano satria 1 na 2 dirhams ihany. Izany no traikefa mahavariana satria ireo sambo ireo dia kely sy fohy satria ny fahatsapana mitsangantsangana ao dia toa ka saika hilatsaka anaty rano ianao.
Ny sambo dia mety hiakatra amin'ny 4 na 5people ary mazàna misy olona iray manetsika ny sambo. Rehefa tonga any amin'ny ilany ianao dia miditra amin'ny tontolon'ny magical tanteraka. ny souk taloha tao Dubai. Feno bazaars ny arabe kely. Ny fahasamihafana lehibe sy ny be dia be dia be hitanao amin'ny fiainanao. Ny gony lehibe dia feno zava-manitra maro loko, ny sasany aminy aza tsy fantatra sy mahazatra. Ary ny fofona manitra sy manitra eny amin'ny rivotra azonao tsapain-tanana avy aminy dia tena mamy sy tsy manam-paharoa izay ho tratra ao an-tsainao mandrakizay. Ity dia toerana iray hafa izay mila ny fairytale "Ali Baba sy 40 mpangalatra".
Dubai City - Famaranana
Eto no hifarana ny fitsangatsanganantsika, fa ity tanàna ity dia miafina amin'ny toerana maro hafa izany no mahagaga sy tranga hitrandrahana. Dubai dia iray amin'ireo mahaliana indrindra ary tanàna mavitrika eto an-tany, izay tokony hotsidihinao.
Dubai City Company manome ankehitriny mpitari-dalana tsara ho an'ny fiainana ao Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hampakatra vaovao ho an'ny fiteny tsirairay ho antsika Jobs in Dubai Guides. Ka miadidy izany ao an-tsaina, dia afaka mahazo izao ianao izao mpitarika, toro-hevitra sy asa amin'ny Emirà Arabo Mitambatra amin'ny fiteninao.